Ikusasa Lezivumelwano Zokuzibophezela Usebenzisa iBlockchain | Martech Zone
Kuthiwani uma izinkontileka zingazenzela ngokuzenzekelayo uma kuhlangatshezwana nemibandela ethile? Kule infographic, Amandla Ezivumelwano Ezihlakaniphile ku-Blockchain, I-Etherparty ichaza ukuthi leli akulona ikusasa - Izinkontileka ezi-Smart ziba ngokoqobo. Izinkontileka ezihlakaniphile zingasusa ubuhlakani bokuthola iziqu zenkontileka kanye nezingxoxo ezandleni zabantu abathatha izinqumo, zinikeze amathuba amangalisayo amaqembu ukuthi avale amadili alungele iqembu ngalinye - maqondana nezindleko, ukwethenjwa, nokwenza.
Uma ufuna i-athikili ejulile kubuchwepheshe beBlockchain nobuchwepheshe be-Cryptocurrency, ngingancoma I-CB Insights i-whitepaper.
Buyini ubuchwepheshe beBlockchain
Siyini isivumelwano se-Smart?
I-Etherparty, ithuluzi lokudala izinkontileka ezivumela abasebenzisi ukuthi bakhe izinkontileka ezihlakaniphile kunoma iyiphi i-blockchain ehambisanayo, ichaza inkontileka ehlakaniphile Ngokulandelayo:
Njengoba igama liphakamisa, izinkontileka ezihlakaniphile zisebenza ngokuqondiswa kolimi lwekhodi, kuzivumela ukusebenza okususa isidingo samakhono wokuhlela womuntu ngale kwemiyalo yasekuqaleni enamakhodi. Ukusebenza kwenkontileka kunika amandla amaqembu amabili ukuthi asebenze ngesivumelwano sedijithali esiphoqelelwe, kwezinye izimo kususwe isidingo sabaphakathi noma sabameli. Izinkontileka ezihlakaniphile zisuselwa emphumeleni, nokuqedwa kolimi lwekhodi yazo kusuka kokufakwayo okubekiwe.
Kepha izinkontileka ezihlakaniphile zinikela okungaphezu kwalokho okushiwo yigama lazo; izikali zabo zokuphazamiseka zingaphezulu kwamabhizinisi amabili abheke ukwenza isivumelwano sibe semthethweni. Izinkontileka ezihlakaniphile zinokusebenza ukwenza lula nokukala izinqubo ezizimele nezinhlelo, zihambisa idatha ngokufanelekile zisuka kwelinye ibhizinisi ziye kwelinye ngaphandle kwenkinga noma ukuphazanyiswa kweprosesa elenziwa ngesandla. Imvelo evikelekile yamanethiwekhi asatshalaliswa ngobuchwepheshe be-blockchain namabhulokhi anesitembu sesikhathi ayaziphazamisa, kepha yizici zobuchwepheshe ezihlukile zokucubungula idatha ezenza kube nezinguquko kumabhizinisi namuhla adinga umuntu wesithathu aqinisekise ukuthengiselana.
Le infographic ichaza ubuchwepheshe, inqubo, izinzuzo, inani, kanye nobunzima bezivumelwano ze-Smart neBlockchain.
Tags: blockchainUbuchwepheshe be-blockchainukuqonda kwe-cbmthokoethereumizivumelwano ezihlakaniphileyini i-blockchain